2019 Gobolka Cinwaanka Magaalada - Block by Block - Dhisidda Lancaster adag
Dhisidda Lancaster adag, Block by Block
2019 Gobolka Cinwaanka Magaalada
Hoos waxaa ku qoran qoraalka Duqa Magaalada Sorace ee 2019 ee cinwaanka Magaalada, laga soo bilaabo Talaadada, Janaayo 22, 2019.
Fiid wanaagsan. Waad ku mahadsantahay inaad timaaddo Gobolka ugu horeeyay ee Cinwaanka Magaalada. Caawa, waxaan jeclaan lahaa inaan haysano magaaladayada ka dib markaan dhameysto sannadkeyga ugu horeeya ee Duqa Magaalada.
Bilaha dhow, waxaad maqli laheyd inaan ka hadlo sida aan u baahannahay inaan ku baraarno "IYO" halkii aan u oggolaan lahaa "midkood / ama" inuu ku fekero inuu ku sifoobo habka aynu u wajahayo arrimaha ugu culus.
Ku noolaanshaha xiisadaha "IYO" waxay noqotay mawduuc aan rasmi ahayn. Marar badan, aragtida magaaladeena waxay saameyn ku yeelataa doorasho adag oo aad u adag: midkeennu waa hoogaaminno magaalooyin badan oo yaryar oo ku yaala waddanka, kor u qaadida nolol-maalmeedka, iyo liisaska safarka, AMA annaguna waa magaalo ay wajahayaan saboolnimo saboolnimo, jinsiyad farqiga u dhexeeya dakhliga, iyo dareen culus ah oo aan qof walbaa la kulmin boodhka kacdoonka ee magaalada.
Xaqiiqdii, waa kiiska, in aynnu nahay ... ". Anaga waa bulsho gaar ah IYO waxaan u baahannahay inaan ka sii fiicnaano. Waa in aan rajo ka qabno mustaqbalka, waana xaqiiq dhab ah oo ku saabsan shaqada aan wali sameyneyno, wadajir.
Inkasta oo bulshadeena, ayadoo la adeegsanaayo qaababka badankood, ayaa wanaajinaya, waan maqli doonaa, waana inaan caddeeynaa in qof kastaa uu ku soo hagaagayo horumarinta marka ay noloshooda nolol maalmeedkooda ku jiraan. Gaaban, Gobolka Magaalada waa mid aad u wanaagsan, laakiin waa in ay dareemaan sida dad badan. Qofna lama tagi karo ama laga tegayo haddii aan rabno inaan abuurno Lancaster dhaqaale ahaan, dhaqan ahaan, iyo deegaan ahaanba la sii wadi karo.
Waxaan rumaysanahay in xitaa iminka si xoogan loo hubiyo in waxyaabaha Lancaster ka dhigo meel khaas ah - kala duwanaanshaheena, jawigeena iskaashiga ah, anshaxa shaqada iyo qiimaha asaasiga ah - waa sifooyin aad u badan oo ku saabsan maalin kasta oo qof kasta oo degane ah uu wadaagayo hantida in Lancaster ay bixiso.
Xaaladda Magaalada ayaa muujin doonta shaqada aan qabannay sannadkii hore. Shaqadan ayaa lagu wargeliyay afar mudnaanood oo aan ku qeexay ololahayga. Waxaan rajeynayaa in mudnaantaas ay bilaabayaan inay si fiican u yaqaanaan. Waxay yihiin: xaafado xoog leh, waddooyin badbaado leh, dakhliga ku-meel-gaadhka ah, iyo dawlad wanaagsan.
Inkastoo maayarku aanu saadaalin karin fursadaha badan ee aan la filayn iyo dhibaatooyinka ay la kulmi doonaan - waxayna u egtahay sannadkii ugu horeeyay ee qaybteeda caddaalad ah ee labadaba-afartan mudnaanood ayaa waxay hagaysay go'aansigeyga adigoo maraaya iyo dhuuban.
Caawa ka dib, waxaan idin kula wadaagi doonaa qorshaha istaraatiijiyadeed ee kooxdayda iyo aniguba aan ka shaqaynayey lixdii bilood ee ina dhaafay. Qorshahani wuxuu bedelay mudnaantaan khariidad-hawleed saddexda sano ee soo socota. Sannadkan, ayaan ka hadli doonaa aragtida oo kaliya, laakiin sidoo kale hawsha hore ee 2019. Waxaan qiyaasi karaa sanadka soo socda, Gobolka Cinwaanka Magaalada wuxuu noqon doonaa mid ka yar hadalka, iyo guud ahaanba guud ee ujeeddooyinka aan gaari karno, iyo wixii aan ku seegnay, iyo sababta. Sannadkan, waxaan rabaa inaan isticmaalo wakhti aan ku siino fikrado ku saabsan waxa ay macnaheedu tahay.
Qoraalka aragtida qorshahan istaraatiijiyadeed waa: dhisida bulsho xooggan, oo xakameynaya xayiraadda.
Tani aniga iigaa ka weyn oo ah shucuur. Waxay ka koobantahay waxa aan rumaysanahay in ay tahay fursad gaar ah oo hadda ah. Hadda, ka dib toban sano shaqo si loo dhiso kaabayaasha dowladda, in la dhiso iskaashiyo cusub, iyo in la xaqiijiyo dib-u-dajin wayn oo ah Magaalada - bulshadeenu waxay isku xireysaa aragti la wadaago.
Aragtida, ereyada Dr. Wubah ee dabbaaldegga MLK ee shalay, "haddii aan nahay OK, iyo deriskeena ma ahan mid sax ah, ma ahan OK". Sidii muhiimka ah aragtida la wadaago waa xaqiiqda, muhiimadda - waxaan si wadajir ah u awoodnaa inay yeeshaan karti, aqoon-u-hel, tamarta, wada-shaqeynta, iyo, intooda badan, kuwa aan cidina u qaban doonin si ay u noqdaan - si loo hubiyo in deriskeena ay yihiin kuwo sax ah. Aragtidan aragtida waa halka aan ku arko fursadda ugu weyn ee lagu ogaanayo aragtida dhisme bulsho xooggan. Isku-dhafkan. HADDA.
Sidaas, waxaan u bilaabi doonaa qiimeynteyda sanadka oo leh xaafad, sababtoo ah waxaan rumaysanahay in tani ay tahay meesha fikradda xakameyn-ku-dhejisku uu ku helayo muujintiisa buuxda.
Waxaan u shaqeynay Agaasimadii ugu horreysey ee Isuduwaha Xaafadda ee Degmada.
Waxaan ahaa mid ka mid ah toban magaalo oo wadanka ah si aan u helno deeq-lacageedka Bloomberg Love Your Block si aad u kordhiso hawlgalada oo aadna hoos u dhigto duufaanta Howard Avenue iyo Churchtowne Neighborhood.
Waxaan qabannay Duqa Magaalaweynta Deegaanka oo leh shirar beeleed oo ku yaalla dhammaan qaybaha magaalada iyo fursada hoggaamiyeyaasha xaafadaha in ay wax badan ka bartaan maamulka magaalada.
Waxaan sii wadeynaa taageerada iyo kobcinta awooda kooxaha xaafadaha ee aad u yaaban iyo ururrada aan faa'iido doonka ahayn kuwaas oo ka dhigay xaafadaha diiradda saaraya.
Iyada oo taageero gaar ah, waxaan maal galiyay xafladaha 10 ee magaaladan oo deriska wada keeney ujeedo caadi ah.
Kooxda Shaqada Deriska, oo isugu keenta shaqaalaha mushkiladaha xallinta dhibaatooyinka dhamaan waaxyada magaalada, waa kor iyo hoos. Waxaan aqoonsanahay in arrimaha xaafadu aanay adeecin xudduudaha qaybaha ee Hall Hall. Wax ka qabashada arimo dhowr ah markasta waxay naga dooneysaa in aan isku dhafanno oo aan ka sii shaqeyno si aan uga shaqeyno siló edbin ah si aan shaqada u qabano.
Waa maxay micnaheedu?
Inta badan shaqooyinka Sanadkan Xoogan ee Sanadkan waxa uu aasaasay aasaaska lagu dhisayo dadaalka mustaqbalka ee mustaqbalka. Dadaaladaasi waxay ku saleysnaan doonaan dhowr qodob oo ujeeddadoodu tahay in ay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya dadka deegaanka, Dawladda Hoose, kuwa aan faa'iido doonka ahayn, meelaha cibaadada iyo daneeyayaasha ganacsiyada ah ee la shaqeeya aragti wadaag ah si loo hagaajiyo xaafadaha. Dhisidda shaqooyinka aasaasiga ah macnaheedu waa dhismaha beesha, abaabulidda shirarka, iyo awoodsiinta dadka deegaanka si loo abuuro qorsheyaashooda (taageeradooda) si ay u abuuraan kobcitaan joogta ah oo muujinaya mudnaantooda.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah oo badanaa la iska indho-tiray ee shaqadan xaafadda ayaa kaalinteeda ka qaadaneysa dib u riixida cirib-tirka xun ee kor u qaadista. Waxay u muuqataa aniga inaan u baahannahay in aan heysano, iyo wada hadal bulsho oo qoto dheer oo ku saabsan mawduuca, sababtoo ah inta badan ma isticmaalayno ereyga habab joogto ah. Gentrification ayaa loo adeegsadaa in lagu tilmaamo wax kasta oo ka yimaada barokacayaasha dadka hadda jira iyo kor u kaca guryaha iyo qiimaha kirada, illaa iyo ganacsiga cusub iyo xirmooyinka foornooyinka aanan jeclayn.
Haddii ay jirto hal hab oo ay dawladaha hoose ka ciyaari karaan kaalin muhiim ah oo ka hortagaya waxa aan u maleynayo in ay yihiin cabashooyinka ugu culus ee la xiriira gumeysiga (ie, barakaca) waa iyada oo la dhisayo nooca xuddunta iyo go'aan gaarista dadka u oggolaanaya dadka deggan inay leeyihiin tiro ballaaran waxa ka dhaca xaafadooda.
Waxaa jira taxaddar aad u dhiirigelin leh oo ka mid ah deeq-bixiyeyaasha, kuwa aan faa'iido doonka ahayn iyo siyaasad-dejiyeyaasha si loo hubiyo in xaafaddeena ay hayso kala-duwanaanta dhaqameed iyo taariikheed. Deganayaashu waxay rabaan xaafaddooda inay hagaajiyaan, IYO waxay doonayaan in ay ka faa'iideystaan ​​horumarintaan, ee aan ka dhicin! Ma dooneyno inaan joojino maalgelinta xaafadaha, kordhinta lahaanshaha guriga, taageerida ganacsiga yaryar, IYO waa inaan ujeedo iyo istaraatiijiyeyn ku saabsan sida aan u samayno!
Xaafadaha adag waxay yihiin xaafado ammaan ah. Qodobka muhiimka ah ee xaafadaha nabdoon waa xidhiidhka joogtada ah ee u dhaxeeya deganayaasha iyo saraakiisha sharci fulinta ee u adeega. Khadadka khaladka ah ee xidhiidhkani waxa uu muujiyay muuqaal buuxa oo ka jira beesheena ka dib markii dhacdadu ay ahayd bishii June. Soo celinta iyo balaarinta kalsoonida ka dhex jirta bulshada iyo booliska ayaa ah mudnaanta koowaad ee miino iyo hoggaankeena booliska. Waxaan garowsanahay in xiriiradani aysan aheyn mid kaliya habeennimadana waxaan aaminsanahay in aan qaadnay tallaabooyin qumman oo cajiib ah oo ku saabsan himiladaas.
Waxaanu abuurnay Kooxda Qorsheynta Bulshada si wax looga qabto xidhiidhada booliska iyo dadka deggan
Waxaan dib u eegney Isticmaalka Siyaasadda Goobta.
Waxaan maalgelinay kaamirooyinka jirka oo bilaabay barnaamij tijaabo ah bishii November.
Waxaan abuurnay Dhibanaha Baahiyaha Jaaliyadda si loo sii wanaajiyo shaqada hawsha ka qaybgalka bulshada ee xaafadda.
Waxaan abuurnay shaqaale bulsho bilays oo shaqeynaya si aan u taageerno dadkeena dhibaatooyinka
Waxaanu martigelinnay dhowr Caffe oo leh Cop / Rinjiyeynta xafladaha Booliska si ay u buuxiyaan qaabab dhaqameed badan oo ka mid ah xisbiyada isku-dhafan.
Waxaan leenahay afar sarkaal oo shahaadeysan si ay u tababaraan farsamooyinka bileyska ah iyo xeeladaha booliiska oo la ogeysiiyo
Waxaan sii ballaarinnay qorista iyo fursadaha waxbarasho ee Degmooyinka Magaalada si ay u riixaan ujeedada xooggan oo ka tarjumaysa kala duwanaanta Magaalada, sababtoo ah kaliya 6 ee dhibcaha gudbinta 122 waxaa ka helay City City sanadkan.
Wadajir ahaan ficiladani waxay ku salaysan yihiin aasaas muhiim ah shaqada. Halka aan bedeli karno siyaasadaha iyo habraaca si ay ufilamaan hadafyadaas, waxaan heysanaa oo dooneynaa. Laakiin shaqada dhabta ah - shaqada lagu dhisay xiriiryo qotodheer leh iyo aragtida la wadaago - waxay u baahnaan doontaa in la furo sannadihii la soo dhaafay, maaha bilooyin.
Qaar ayaa su'aal ka keenay in Kooxdayada Qorshaha Beesha (Community Planning Group) ay tahay jawaabta saxda ah ee lagu abuurayo xiriir wanaagsan oo udhexeeya dadka deegaanka iyo booliska. Taa bedelkeeda, waxay aaminsan yihiin inaan u baahanahay Guddiga dib u eegista rayidka. La tashiga aan la leenahay Adeegga Xiriirka Bulshada ee Wasaaradda Caddaaladda iyo sahanka qaranka ee Guddiga Dib-u-eegista Madaniga ah ayaa muujinaya, iyada oo aan laheyn awood sharci-daro ah - Awood aan awood u lahayn Duqa Magaalada - Golayaashu inta badan waxay calaamad u yihiin oo aan gaarin hadafkooda ah inay abuuraan xisaabtan, ama xiriiro wanaagsan.
Xaalado badan, waxay soo horjeedaan saameynta loogu talagalay, waxaana ay ku abuurtay kalsooni dheeraad ah iyo xiisad dhex marta dadka deegaanka iyo booliska. Ma xiiseynayo in aan abuuro gawaarida waraaqaha. Waxaan doorbidaa tallaabo horey u socota oo ah ficil firfircoon, taas oo ku saabsan xalinta dhibaatooyinka ka hor inta aan la soo saarin oo ku saabsan si caqli gal ah marka ay qabtaan.
Jaaliyad ahaan, mar dambe ma noqon karno kiiska aan ka daalineyno bileyska marka kamaradaha wargeysyada ay joogaan oo iska indha tirayaan cilaaqyada ay tahay in la dhiso marka ay tagaan. Waa inaan ka sii fiicneyn tan tan! Ma aha shaqo fudud, laakiin waa lagama maarmaan. Waa mas'uuliyadda beesha oo dhan si ay u hesho habab hore loogu sii wado arrintan muhiimka ah.
Dhagax weyn oo xaafad xoog badan leh waa tayo, guryo ammaan ah. Qodobo kooban ayaa leh xaafadaha dib u noqoshada guryaha dhibaatooyinka. Intii aan shaqeynayey toddobaadkii labaad, waxaan weydiistay liis ah tobankii ugu sareeyay ee mulkiilayaasha; mulkiilayaasha oo si joogta ah u diidan xitaa heerarka aasaasiga ah ee guriyeynta iyo lumiyay waqti qaali ah iyo lacagta canshuur bixiyaha iyaga oo u baahan kormeerka kormeerka kadib ugu dambeyntii noqdaan kuwo u hoggaansamaya.
Waxaan tallaabo qaadnay tallaabo adag oo ka dhan ah laba mulkiilayaasha mashaakilka kuwaas oo, wadajir ahaan, leh (lahaansho) hantida 40. Kooxdaydu waxay keentay dadaal isku duuban oo lagu baadho guryaha hantida Dwain London Sr., taas oo lagu ogaaday in ay tahay mid aan badbaado lahayn, oo aan haysan, iyo xaalado badan, oo u shaqeynaya sidii aqallo sharci daro ah. In kasta oo ay jirto hanjabaad aniga iyo shaqaalahayga ah, oo ku dhammaaday weerarka fulaynimada ah ee Magaalada Hall, waxaan u riixnay si aan u hubinno in guryahaas loo soo saaray code ama la cambaareeyay.
Xaaladahaan, kireystayaasha guryaha curyaanka ah waxay isu arkaan, iyaga oo aan lahayn khalad iyaga u gaar ah, si lama filaan la'aan ah guri la'aan. Natiijada aan loo baahnayn ee shaqo fulin wanaagsan ayaa abuuray mid kale oo la mid ah / ama murugo: ama waxaan u dulqaadan karnaa xadgudubyada guriyeynta oo khatarta amniga deganayaasha ama waxaan hirgelineynaa xeerka iyo khatarta ka iman karta kireystayaasha aan waxba galabsan.
Shaahkaygu, oo uu hoggaamiyay Milzy Carrasco, waxay arkeen qaab cusub oo lagu helo "IYO" xaaladdan. La shaqeynta lamaanayaasha beesha, milkiilayaasha hantida, milkiilayaasha hantiilayaasha iyo maalgeliyeyaasha khaaska ah, waxay abuureen nidaam keeni kara in badan oo ka mid ah shakhsiyaadka ku bara-kacay falalka aan loo dulqaadan karin ee milkiileyaashooda. Waxaan u magacaabnay barnaamijka "Meeqa Xanaaneeyaha Daryeelka". Waxay la mid tahay mulkiilayaasha doonaya inay bixiyaan guryaha kirada dhexdhexaadka ah kireystayaasha.
Iyadoo loo marayo barnaamijyo jira oo ka socda Community Action Partnership, Tabor, iyo Iskaashatada Guryaha Lancaster Opportunity, kiraystaha waxaa la siiyaa taageero dhaqaale iyo bulsho kale, taas oo kor u qaadaysa suurtagalnimada in kireystayaashu ay abuuri karaan deganaansho deg deg ah ayna yareyn karaan khatarta ay qaadeen mulkiilaha. Laba iyo shan codsi ayaa la helay waxaana barnaamijka la ansixiyay Isbahaysiga Lancaster County si loo dhammeeyo Hoylaawayaasha.
Intaa waxaa dheer:
Waxaan sii wadnay iskaashigeenna, waxbarashadeena iyo dhaqaalaheena si aan u caawino hagaajinta halista macdanta ee hoyga magaalada.
Iyadoo gacan ka heleysey dabeecadaha dabka waxaan dadka deegaanka wax ku bareynay helitaanka qalabka digniinta dabka oo bilaash ah oo loo qaybiyey qalabka digniinta dabka 115 ee degaannada.
Hore waxaan u baahannahay inaan bedelno ugu yaraan hal dhinac oo ah fekerka ku saabsan guriyeynta, taas oo ka imanaysa meelmarin badan oo wax-qabad ah si loo helo waxbarasho firfircoon (iyo fulin). Ka baxsan wareeggayaga wareega wareegga ah ee afar sanno ah, sannadkii hore waxaan helnay cabashooyinka 2,000 ee ku saabsan guryaha dhibaatooyinka kiraystayaasha iyo deriska.
Waxaan dooneynaa inaan ka horeyno xargahaas si aan u joojinno dhibaatooyinka ka hor inta aysan gaarin meelaha ay ka soo galaan kheyraadka magaalada waxayna noqdaan kuwo jiidaya dhismahayaga. Waxaan bilaabnay inaan hirgelinno qalabka loo baahan yahay si aan u sameyno taas. Awoodda ugu weyn waa xogta dhismaha "Building Blocks", taas oo naga caawin doonta inaan si wax ku ool ah u fahanno meesha laga dhigi doono khayraadka iyo sida loo hagaajiyo iyaga si loo helo goobaha dhibaatada ka hor inta aan la galin xaalad qalalaase iyadoo la adeegsanayo qaababka saadaalinta ah.
Guryaha la awoodi karo, waa cad, waxay ku jirtaa maskaxda Lancastrians badan, oo ay ku jirto. Waa dhibaato qaran. Dhammaadka maalinta, Magaaladu, keligeed, ma laha awood sharci ama dhaqaale si ay si weyn ugu kordhiso saamiyada guryaha la awoodi karo. Waxaa jira caqabado badan oo ay ku kici karaan helitaanka, laakiin qaar xoogaa ka badan oo ka hooseeya mushaarka hooseeya (taas oo aan mar dambe taaban doono) iyo shaqo la'aanta sare ee aagagga xooggan ee magaalada.
Sanad walba, magaaladu waxay ku maalgalisaa qoondaynta dawladda federaalka ee Dollar - $ 400,000 oo keliya marka aad tixgeliso baahidaada - in la ilaaliyo guryaha la awoodo iyo lammaanaha dadka kale si loo abuuro wax badan. Caymiska canshuuraha ee guryaha la awoodi karo ee ka yimaadda dawlada Federaalka iyo Dawlad Goboleedka ayaa intooda badan la qalajiyey, shirkado badan oo gaar ahna awood uma laha in ay abuuraan guryo la awoodi karo si macquul ah. Anigu waxaan dhihi karaa inaanan ka hor istaagin doorka magaalada ee shaqadan, laakiin in la caddeeyo in tani ay tahay dhibaato bulsho oo u baahan xal bulsho oo buuxa. Shirkadaha gaarka loo leeyahay, kuwa aan faa'iido doonka ahayn, Dawladda Magaalada, iyo deganayaasha waxay u baahan yihiin inay isku yimaadaan si ay u helaan xalal cusub oo lagu maal galiyo guryaha la awoodi karo.
Wada-hadallada guryaha la awoodi karo waxay badanaaba waxay la kulmaan cadho iyo niyadjab ku saabsan mashaariicda horumarinta dhaqaale ee cusub ee soo galaya internetka ee Magaalada. Sidee, qaar ka mid ah waydiin karaan, magaalo oo leh mashaariic malaayiin doolar oo malaayiin dollar ah iyo shirkado cusub oo wali wali la halgamaya guriyeynta degaankeena? Jawaab buuxa ayaa buuxin doonta fiidkii intiisa kale, laakiin waxaan rumeysanahay in su'aasha su'aashu ay tahay mid kale oo ka mid ah doorashooyinka been abuurka ah: midkiina waxaad ku jirtaa horumarka dhaqaale AMA guryaha la awoodi karo.
Waxaan maqlaa dareenka ku saabsan 101NQ, tusaale ahaan. Waxa aan arko waa mashruuc isbeddelaya dhismaha la daadiyay, dhismaha ciriiriga ah, waxaanay ahayd curiyayaal dib-u-nooleyn buuxda oo ka mid ah meelihii magaalada ka baxsan. Waxaan arkayaa ganacsi u keenay Lancaster shirkad tayo leh oo leh shirkad tiknoolajiyad leh, oo haysata qorista iyo tababarida dadka deggan magaalada si ay ugu shaqeeyaan barnaamijyada mushaharka sareeya sida mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee muhiimka ah. Waxaan arkayaa 101NQ oo dib loo soo nooleeyay oo bixin doona canshuur qiimo aad u sarreeya oo noloshana u keenaya Lancaster Square, oo ah nabar yar oo dib loo cusbooneysiiyo magaalada.
Waxaan ku oroday aaminaada ah in dakhliga sugan uu aasaas u yahay caafimaadka dhaqaalaha iyo ladnaanta magaaladeena. Guryaha la awoodi karo, ma jiraan waxyaabo badan oo magaalada oo kali ah ay keligaa samayn karto si toos ah saameyn ugu yeelato mushaharka ay deganayaashu guriga keenaan. Sharciga gobolka ayaa naga mamnuucaya inaan abuurno mushaharka ugu yar ama fulinta koontaroolka kirada. Laakiin waxa aan awoodi karo (oo aan sameeyay) waxay isticmaali karaan minbar-diiqda xoogga leh iyo awoodda ku-oolka ah ee Xafiiska Duqa Magaalada si loo abuuro iskaashiyo u kici kara irbadda mushaharka.
Xaqiiq ahaan, 2018 ma ahan sannadkii fulinta qorshe weyn oo ku saabsan dakhliga sugan. Taa bedelkeeda, waxaan sannadkan ku soo qaatey ciyaartoy muhiim ah oo qabta shaqada loo baahan yahay si aan u fahamno dhibaatooyinka aan wajahayo. Arrinta hoose waxay ku koobnaan kartaa sidaan: Shaqo bixiyeyaasha mushahar bixiya ma buuxin karaan boqolaal shaqooyin banaan. Magaaladu waxay la kulantaa heerka shaqo la'aanta laba jeer oo ka mid ah Gobolka oo saddex jeer ka sarreeya guud ahaan guud ahaan Gobolka. Maxay yihiin caqabadaha ku haya kuwa u baahan shaqooyinka magaalada ee shaqaalihii u baahnaa shaqaale? Falanqaynta dhibaatada ayaa muujisay qaar ka mid ah culeysyada caadiga ah: gaadiidka, daryeelka caruurta, waxbarashada iyo tababarka, iyo kuwo kale oo badan.
Ku darida dheeraadka ah waa isku kalsoonaanta bulshadu ku leedahay dhammaan qaybaha muhiimka ah si loo xaliyo dhibaatooyinka soo noqnoqda. Waddada hore, waa in loo baahan yahay isbeddel nidaamsan si loo hubiyo in qaybaha shaqsiyadeed ay si fiican u wada shaqeeyaan.
Dhamaadkan, koox shuraako ah (Shuraako Ganacsi Wadareed, Rugta Ganacsiga, Guddiga Horumarinta Shaqaalaha, Hantida, iyo EDC) ayaa dalbaday $ 2.6M oo ka yimid JP Morgan Horumarinta Magaalooyinka. Deeqda ayaa noo ogolaaneysa inaan hubinno in dadka magaalada deggani ay ku xiran yihiin adeegyada bulshada, tababarka, xanaanada caruurta, iyo gaadiidka ay u baahan yihiin si ay u helaan mushahar si fiican, mihnadlaha iyo loo-shaqeeyayaashu waxay ka helaan shaqaale joogto ah oo ka shaqeeya Lancaster - xayiraadda block.
Noocyada noocaan ah ee dadaalka iskaashiga ah waa inay sii wadaan. Ma jiro cid kale oo xallinaysa dhibkan.
Waxaan ku faanayaa waxyaabo badan oo aan ku guuleysanay sanadkaan, marka la eego howlaha dawladda.
Waxaanu ka buuxinnay jagooyin muhiim ah hoggaanka Booliiska, Dab-damiska, iyo Waaxda Hawl-galka Deriska.
Mashaariicda maareynta biyaha daadadka ayaa loo aqoonsaday gobol ahaan, qaran ahaan, iyo caalam ahaanba waxqabadkooda iyo waxtarkooda.
Waxaanu billaabnay guddi-hawleedka cimilada ee cimilada, kaas oo qiimeyn doona sida hawlgallada magaalada ay si fiican ula shaqeyn karaan yoolalka Heshiiska Cimilada ee Paris.
Waxaan ku sii soconay waddada maslaxadda maaliyadeed waxaanan siinay hufnaan dheeraad ah habka miisaaniyadda.
Waxaanu ballaarinnay ka qaybqaadashada Guddiyada, Guddiyada, iyo Maamulka ee kooxda ugu kala duwan ee dadka deggan magaalada.
Waxaan bilownay habka dib-u-habeynta bogga internetka ee magaalada si loo sameeyo qaabab badan oo loo adeegsado, is-taabasho, oo loo heli karo kuwa aan Ingiriiska ku hadlin iyo ballaarinta dadaalkeena warbaahinta bulshada si aan u gaarsiinno deganayaasheena siyaabo cusub.
Hadda, waxaan jeclaan lahaa inaan diiradda u saarno saddexda sano ee soo socota - Qorshaha istaraatiijiga ee magaalada oo ka wada xaajoon hawsha hore ee 2019.
Ku-beddelka SLIDE DECK
Horumarka ka hor
Danene Sorace, Duqa Magaalada
© 2020 Magaalada Lancaster, PA.
Siyaasadda Khaaska ah iyo Diidmada
Soo Gudbi Warcelin
Xafiiska Duqa Magaalada
Bogga Mighty Fine Print
Waxaan dhiseynaa shaashad waxqabadka cusub! Noosheeg cabirka aad jeclaan laheyd inaan raacno.